Deni oo shaaciyay doorkii uu kulahaa Isbedelka doorasho ee ka dhacay dalka | dayniiile.com
Home WARKII Deni oo shaaciyay doorkii uu kulahaa Isbedelka doorasho ee ka dhacay dalka
Deni oo shaaciyay doorkii uu kulahaa Isbedelka doorasho ee ka dhacay dalka
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ka hadlay doorashadii Madaxweynenimo ee uu uga qeyb galay Magaalada Muqdisho iyo doorkii Puntland ku laheyd in isbedel uu ku dhaco hoggaanka dalka Soomaaliya.
Madaxweynaha oo Maanta khudbad ka jeedinayay furitaanka kal-fadhiga 50aad ee Baarlamaanka Puntland ayaa u mahad celiay cidkasta oo taageero u muujisay markii uu isku sharaxay xilka Madaxweynaha Somalia, isaga oo sheegay in uu aaminsanaa in uu yahay qofka ka saari kara caqabadaha kajira Soomaaliya balse taasi ay dhici weeysay.
Sidoo kale Deni wuxuu sheegay in shirarkii uu uga qeyb galay Magaalada Muqdisho, sida shirkii golaha wadatashiga qaran ay kaga heshiiyeen madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada arrimo ku saabsan dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa kamid ahaa musharrixiintii soo gaaray wareegyadii ugu dambeeysay ee tartankii doorashada Madaxweynaha Soomaaliya, hayeeshee ugu dambeyn uu ku guuleystay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Next articleDad ku dhintay Shil Gaari oo Maanta ka dhacay Magaalada Jowhar
Booliiska Columbus oo dacwad kusoo oogay nin labaad oo loo haysto...